कोरोना परिक्षण गर्ने भन्दै प्रयोगशालाका टेक्निसियनले एस्तो गरेको थाहा पाएपछी युवतीसमेत परिन तीनछक्क !! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना परिक्षण गर्ने भन्दै प्रयोगशालाका टेक्निसियनले एस्तो गरेको थाहा पाएपछी युवतीसमेत परिन तीनछक्क !!
कोरोना परिक्षण गर्ने भन्दै प्रयोगशालाका टेक्निसियनले एस्तो गरेको थाहा पाएपछी युवतीसमेत परिन तीनछक्क !!
कोरोनाका कारण अहिले अधिकांश मुलुकले लकडाउनको नीति अवलम्बन गरेका छन् । यस्तै कोरोनाका कहरबीच विभिन्न मुलुकमा अनौठा समाचार पनि बाहिर आएका छन् । हालै भारतको महाराष्ट्रको अमरावतीबाट एउटा लाजमर्दो घटना घटेको छ।जहाँ एक प्रयोगशाला टेक्नीशियनले कोरोना परिक्षण गर्ने भन्दै एक युवतीको गोप्य अंगवाट नमुना लिएका छन् । यो घटना उजागर भए पछि हलचल मच्चिएको छ। युवतीले पुलिसमा उजुरी गरेपछि ति टेक्निसियन पक्राउ परेका छन् । प्रयोगशाला प्राविधिकको नाम अल्पेश अशोक देशमुख बताइएको छ । यो घटना अमरावतीको कोविड ट्रामा सेन्टर ल्याबको हो।
भारतीय समाचार संस्थाका अनुसार यि युवती एक स्टोरमा काम गर्छिन् । उनी एक कोविड संक्रमितको सम्पर्कमा आएकी थिइनन्, त्यसपछि स्टोरका सबै कर्मचारीहरूलाई सावधानीका साथ २८ जुलाईमा सरकारी प्रयोगशालामा कोरोना टेस्ट दिइयो। थ्रोब स्वाब गरेपछि, प्रयोगशाला प्राविधिकले युवतीलाई भने कि तपाईको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । त्यसैले अब तपाईको पिसाव परिक्षण गर्नुपर्छ ।
कोरोना परिक्षण गर्ने वहानामा यि ल्याव टेक्निसियनले युवतीको गोप्य अंगको परिक्षण गरे । युवतीले यस वारेमा आफ्नो भाइलाई जानकारी गराएपछि घटना बाहिर आएको हो । भाइलाई शंका लागेर चिकित्सकसंग यस वारेमा कुरा गरेपछि उनले बदमासी गरेको खुलेको हो । कोरोना परिक्षणका लागि गोप्य अंगको परिक्षण गर्न नपर्ने भन्दै चिकित्सकले भनेपछि युवतीले प्रहरीमा उजुरी दिएकी हुन् ।
महाराष्ट्रका महिला तथा बाल विकास मन्त्री यशोमती ठाकुरले घटनालाई गम्भीरताका साथ लिएको बताएकी छन् । उनले ति ब्यक्तिलाई कडा कारवाही गर्न निर्देशन दिएकी छन् । का छन र दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने कुरा गरेका छन्। म तिमीलाई बताउन चाहन्छु, महाराष्ट्रमा कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिको संख्या चार लाख पार गर्यो।
विद्युत महशुल घटने भन्दै भर्खरै सरकारले दियो देशैभरका जनताहरुलाइ यस्तो खुसिको खबर !